Haweeney u is taagtay qabashada xilka Madaxweynaha | KEYDMEDIA ONLINE
Haweeney u is taagtay qabashada xilka Madaxweynaha
Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan, oo ah haweeneydii ugu horreysay ee Wasiir Arrimo Dibadeed ka noqota Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ay tahay mushrrax u taagan xilka Madaxweyenaha Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan, ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee si rasmi ah ugu dhawaaqda inay tahay musharrax u taagan qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya doorashada la filayo in ay 2021-ka ka dhacdo dalka.
Fowsiya Yuusuf, waxa ay ku ku dhalatay magaalada Hargeysa ee waqooyiga Soomaaliya 1970-yadii, waxayna noqotay Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya, intii u dhaxeysay 2012 ilaa 2014, xilligaas oo uu dalka hoggaaminayay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxay aas-aastay Xisbiga Dimuqraadiga Qaranka [NDP], oo ah xisbiga kaliya ee ka jira Soomaaliya ee ay hoggaamiso haweeney. Fawsiya ayaana ku dhawaaqday Talaadadii, July 13 inay iyadu tahay musharraxa xisbigeeda ee u tartamaya xilka madax-weynenimada doorashada soo socota ee loo madlan yahay 10-ka bisha Oktoober.
Waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq baahsan intii ay ka jirtay Dowladdii Xasan Sheekh, waxayna dad badan u fududeysay safarradoodii dibadda, inta badan Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, iyadoo lacag badan ka sameysay suuqa tahriibka intii ay ahayd Wasiirka Arrimaha Dibadda.
Ma sahlana in haweeney qabato jagada ugu sareysa dalka Soomaaliya, marka loo eego dhaqanka soo jireenka ah ee so tixnaa tan iyo markii la yabyabay dowladnimada Soomaaliya lixdan sano ka hor.